American Pit Bull Terrier အတွက်လမ်းညွှန်အပြည့်အစုံ - Breeds
The အမေရိကန် Pit Bull Terrier (APBT, Pittie, သို့မဟုတ် Pitty) သည်သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်များစွာကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်နိုင်ခဲ့သည်။
ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှသည်ခွေးတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းအထိဤမျိုးပွားမှုသည်အန္တရာယ်ရှိသောနာမည်ကောင်းရနိုင်သော်လည်း APBT သည်လွန်စွာမှနားလည်မှုလွဲနေသည်။
ဆန့်ကျင်တွင်, Pit Bull ခမ်းနားနမူနာဖြစ်ပါတယ်, Hardy နှင့်ကြွက်သား အလုပ်အတွက်နှင့်မိသားစုခွေးအဖြစ်ကအသုံးဝင်သောနှစ်လိုဖွယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးနှင့်အတူ။
Pit Bull ကိုပြန်လည်မိတ်ဆက်ရန်နှင့်ဤမျိုးရိုး၏လှပမှုကိုပြသရန်အချိန်ရောက်ပြီ။ သင်သိရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။
အမေရိကန် Pit Bull Terrier ဆိုတာဘာလဲ
တစ် ဦး pooch ၏ Powerhouse
တစ် ဦး နိုက်၏စိတ်နှလုံး
Pit Bull ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလဲ
ပျော်စရာအချက် - Pitties ကဝါးတာကိုနှစ်သက်တယ်။
American Pit Bull Terrier ၏ကျန်းမာရေးပြproblemsနာများ
သင့်ရဲ့ Pitty မှန်ကန်သောအစားအစာပေးခြင်း
Pit Bull ပိုင်ဆိုင်သည့်ကုန်ကျစရိတ်
အကောင်းဆုံး Pit Bull မျိုးဆက်များကိုရှာခြင်း
နိဂုံး - အမေရိကန် Pit Bull Terrier သည်သင့်အတွက်လား။
American Pit Bull Terrier ၏မူလအစကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၁၉ ရာစုအင်္ဂလန်သို့အချိန်ပြန်ခုန်ရန်လိုအပ်သည်။
နွားနှင့်ဝက်ဝံငါးမျှားဖြစ်ကြသည် သွေးအားကစား ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဖမ်းမိသောနွားသို့မဟုတ်ဝက်ဝံပေါ်တွင်ခွေးများထည့်ခြင်းပါဝင်သည်။ ခွေးများကိုခွေးလိုင်းများဖြင့်မွေးဖွားလာခြင်းသည်အားကစားနှင့်အရည်အချင်းပြည့်ဝသောခွေးများကိုမွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်သည် နွားနှင့် Terrier ဖောက်။
၁၈၃၅ ခုနှစ်တွင်သူတို့၏အားမရသောသဘာဝကြောင့်ဤအားကစားသည်တရားမ ၀ င်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ခွေးတိုက်ပွဲ။
ခွေးတိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောလူများသည် ပိုမို၍ ရန်လိုသည့်ခွေးများကိုဖန်တီးရန် Bully ရောနှောခြင်းကိုမျိုးဗီဇအသစ်များစတင်မိတ်ဆက်သည်။
စိတ်ဝင်စားစရာအလုံအလောက်သူတို့ကသောဖောက်ဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့သည် ခွေးဆီသို့ ဦး တည်ရန်လိုသာ ဒါပေမယ့်လူ့ကိုင်တွယ်ကိုကိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ American Pit Bull Terrier သည်ထိုစရိုက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးသဘာဝရှိသည် လူသားမြားသတိုက်ခိုက်ရန်ဆန္ဒ။
ပြောင်းရွှေ့အခြေချလာသူများသည်ဤရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အကာအကွယ်ပေးသည့် Terrier မျိုးစိတ်များကိုယူအက်စ်သို့ယူဆောင်လာသောအခါခွေးတိုက်ခိုက်သည့်ကွင်းနှင့်အသတ်ခံရခြင်းနှင့်ဝေးကွာသောဘဝအသစ်များဖြင့်ပျော်မွေ့ခဲ့ကြသည်။
ဤရွေ့ကားစွယ်စုံခွေးခဲ့ကြသည် ချွန်ထက်ခေတ်ရဲ့သွက်လက်, Hardy နှင့်သတိပေးချက်။ သူတို့သည်လည်းစိတ်ကျေနပ်မှုရလိုသောလျင်မြန်သောသင်ယူသူများဖြစ်ကြသည်။
Terrier များကိုအဓိကအသုံးပြုသည် မွေးမြူရေးခွေး သူတို့ပိုင်ရှင်များသည်အမဲလိုက်သည့်ခရီးစဉ်များ၊ သူတို့ကအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည် ထိန်းခွေးများ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးများအပေါ်သူတို့ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောထုံးစံကြောင့်။
နွားခွေးမျိုးစိတ်အသစ်သည်ဤ Terrier သွေးကြောများမှပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်၎င်းသည်မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဖောက်ခြင်းထက်ပိုကြီးသည်။ အဲဒါကိုအမည်ပေးခဲ့တယ် အမေရိကန် Pit Bull Terrier ၁၈၉၈ တွင်ယူကေမှခွဲခြားခြင်းခံရသည်။
နောက်ဆုံးတွင် AKC သည်မျိုးပွားမှုကိုကောင်းစွာအသိအမှတ်ပြုသော်လည်းရှုပ်ထွေးမှုမရှိပါ။
Pit Bulls နှင့်ပတ်သက်သောနားလည်မှုလွဲခြင်း
ဒါဟာ AKC အမေရိကန် Pit Bull Bull Terrier တစ် ဦး သန့်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသော 1930 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။
ရှုပ်ထွေးလာတဲ့ဒီနေရာမှာအခု။ မျိုးဆက်နောက်ဆုံးတွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသောအခါ AKC သည် American Pit Bull Terrier မှပြောင်းလဲခဲ့သည် အမေရိကန် Staffordshire Terrier (Staffy) ။
သူတို့ကဒီကိုပြု၏ ခွေးတိုက်ပွဲများ၏သမိုင်းဖြတ်တောက် အဆိုပါဖောက်ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကနေ။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှ American Staffordshire Terriers အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ထားသောခွေးများသည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အညီကြီးပြင်းလာကြသည် စံ ထူးခြားသောလက္ခဏာအချို့ကိုထိန်းသိမ်းခြင်း။
မှတ်ပုံတင်မထားခြင်းနှင့်အဆင့်အတန်းမမီသောခွေးများအတွက်မူသူတို့သည်ခေတ်သစ် American Pit Bull Terrier ၏သွေးထွက်သံယိုဖြစ်လာခဲ့သည်။
American Pit Bull Terrier နဲ့ American Staffy တို့အတူတူလား။
အမေရိကန် Pit Bull Terrier နှင့် အမေရိကန် Staffordshire Terrier နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောဝတ်ရည်သို့မဟုတ်သူတို့အတူတူခွေးဖြစ်သနည်း
အချို့က၎င်းတို့သည်တူညီသည်ဟုငြင်းခုံကြလိမ့်မည်။ သို့သော် Staffy သည်အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးအလုံးစုံကွဲပြားမှုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
အဆိုပါ Staffy တစ် ဦး အဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့ရပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ် ခွေးပြ , Pittie ပြပွဲများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမရနေစဉ်။
အဆိုပါ Staffy ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ဖြစ်ပါတယ် တိုတောင်း, stockier နှင့်ပိုလေး ။
နှစ် ဦး စလုံးဝတ်အဖြစ်မှတ်နေကြသည် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မိသားစုခွေး အကျိုးပြုအပြုအမူနှင့်အတူ။ သင့်အတွက်မည်သည့်အရာကမှဆင်းလာသောအခါ၊ ထိုအရာအားလုံးသည်ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါ ၀ င်မယ့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့သင်ရှာဖွေနေပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် Staffy ဖြစ်ကောင်းပိုမိုကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်သင်ဟာသင့်ကိုဘယ်တော့မှစိတ်မပျက်စေမယ့်အဖော်ခွေးတစ်ကောင်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် APBT ကသွားဖို့နည်းလမ်းပါ။
လျင်မြန်စွာအမေရိကန် Pit Bull Terrier အချက်အလက်များ
ရဲ့ Pittie အကြောင်းကိုအချို့သောစိတ်ဝင်စားဖို့နှင့်သတင်းအချက်အလက် factoids သို့ငုပ်ကြပါစို့
သောကြောင့်အန္တရာယ်ရှိခွေးအဖြစ် Pittie ရဲ့ဂုဏ်သတင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ပိတ်ပင်ထားသည် အချို့သောမြို့ကြီးများသို့မဟုတ်ပြည်နယ်များရှိ (ကဲ့သို့) ဂျာမန်သိုးထိန်း ပြီးနောက် ကွိုင် ) ။ သင်တစ် ဦး Pittie ပိုင်ဆိုင်နှင့်ခရီးသွားလာရန်စီစဉ်ထားလျှင်, သင်သွားနေဘယ်မှာဥပဒေများအဘယ်အရာကိုသိသေချာပါစေ။
The ထိန်းခွေးယဉ်ကျေးမှု တကယ်ကိုအမေရိကန် Pit Bull Terrier ကကိုယ်စားပြုခဲ့တာပါ ဒီကျော်ကြားတဲ့ Pit Bulls ကိုမေးကြည့်ပါ။ ကြက်ဥ , ဂန္ပြပွဲကနေ Little က Rascals, လှံတံ , အ Buster Brown ဖိနပ် mascot နှင့် နဂါး , အ RCA ခွေး။
ပထမကမ္ဘာစစ်အတွင်းဝါဒဖြန့်ပိုစတာများသည်ကွဲပြားသောခွေးအမျိုးအစားများကို အသုံးပြု၍ နိုင်ငံတိုင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အမေရိကန်ကအမေရိကန် Pit Bull Terrier ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည် သတ္တိနှင့်သစ္စာရှိမှု။
နွားထီးတကောင် သော့ခတ်မေးရိုးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ “ သော့ခတ်ခြင်း” ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုဖွင့်ပေးသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယန္တရားမရှိပါ။ ဤအယူအဆမှားသည်ကြမ်းတမ်းသောခွေးတစ်ကောင်ကဲ့သို့သူတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုတိုးပွားစေသည်။
American Pit Bull Terrier ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ဆောက်ပုံကိုနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသူ၏တည်ဆောက်ပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည် David Michelangelo အားဖြင့်ရုပ်တု။ ဒါဟာအမှန်ပင်ကြွက်သားစုံလင်သည်။
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွယ်စုံရသည့်ခွေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့လျှင် Pit Bull သည်ထိုအရာဖြစ်သည်။ တိုတိုနှင့်ဆူညံစွာ, သူမ၏အမြင့်ရောက်ရှိ ၂၁ လက်မ (၅၃ စင်တီမီတာ) နှင့်အလေးချိန်ရှိသည် 85 ပေါင် (၃၈ ကီလိုဂရမ်) ။
ကြွက်သားများနှင့်အတူတောက်ပအင်္ကျီအောက်မှာတုန်လှုပ် တိုတောင်းသောခြေထောက်များနှင့်သွယ်သောခန္ဓာကိုယ် ဒါကမယုံနိုင်လောက်အောင်မြန်ဆန်လွယ်ကူပါတယ်။ ခေါင်းကိုကျယ်ပြီးပါးစပ်ကြီးတွေနဲ့ခြိမ်းခြောက်လေ့ရှိတယ်။
အမေရိကန် Pit Bull Terrier ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီဖြစ်ပါတယ် မ hypoallergenic , ဒါပေမယ့်သူကအနိမ့်သွန်းသည် ။ အဆိုပါကုတ်အင်္ကျီအနည်းငယ်မျှသာစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သည်။ တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်ပွတ်တိုက်သူသည်သူမ၏ကုတ်အင်္ကျီကိုကျန်းမာစေနိုင်သည်။
အပြာ၊ အနီ၊ အနက်၊ အဖြူနှင့် brindle အပါအ ၀ င်ဆံပင်တိုတိုအင်္ကျီသည်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အရောင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
Pitty ၏ကျယ်ပြန့်သောမျက်လုံးများသည်အထူးသဖြင့်လှပသည်။ သူတို့သည်အဝါရောင်၊ မီးခိုးရောင်၊ အစိမ်း၊ အညိုရောင်သို့မဟုတ်အပြာရောင်တို့၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်အရိပ်များဖြစ်ရုံသာမကနွေးထွေးမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုရရှိစေသည်။
ထိုကြွက်သားများကိုလှုပ်ရှားမှုကြည့်ရှုလိုပါသလား။ နံရံတစ်ခုသို့ခုန်ပေါက်နေသည့် Pit Bull ကိုပြသသည့်ဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
American Pit Bull Terrier နားများဖြတ်တောက်ခြင်း (သို့) မရိတ်သိမ်းခြင်း။
နားမပေါက်သောအမေရိကန် Pit Bull Terrier သည်ခွေးနားရွက်များဖြတ်တောက်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်။ တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖြစ် ပို၍ အသုံးများလာသည်။ သဘာဝကျကျ, နားရွက်ခေါင်း၏နှစ်ဖက်ကျော်ခေါက်နှင့်ထိတွေ့မှုမှ velvety ဖြစ်ကြသည်။
The breed စံ နားကြားညှပ်ထားသော American Pit Bull Terrier ခေါ်ရန်လိုအပ်သည် ခွဲစိတ်ကုသ ခွေး prolf, ဝံပုလွေကဲ့သို့နားကိုပေးရဖယ်ရှားခဲ့သည်။
ဒီအလေ့အကျင့် ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါ ခွေးပြပွဲများတွင်တရားသူကြီးများအတွက်ခွေးဗေဒနှစ်သက်စေရန်ထက်အခြား။
သို့သျောလညျး, သငျသညျ Pit ဒီသီးနှံကိုလည်းရေပန်းစားသည်အတိုင်း, ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်မရိတ်မကြားနားနှင့်အတူ Pit Bulls ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
၂၃၅ PSI ကိုက်သောစွမ်းအားရှိသောမေးရိုး
Pit Bull ၏ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ၎င်းကိုဖြစ်သည် ခိုင်ခံ့မေးရိုး ။ သူတို့ဟာဝါးတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ကစားစရာတစ်ခုနဲ့ကစားနေတဲ့စစ်ပွဲအတွင်းသတိပေးခံရမယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုက်ပြီးကိုင်ထားလိမ့်မယ်။
နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော Pit Bull သည်မည်မျှအစွမ်းထက်သနည်း။ စိတ်ကူးတစ်ခုရရန်အခြား tenacious ခွေးဝတ်ရည်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြပါစို့။
American Pit Bull Terrier နှင့်အမေရိကန်ခွေးဘီလူးများ
American Bulldog သည်ကြွက်သားတည်ဆောက်ပုံ၊ ဦး ခေါင်းကြီးနှင့်မေးရိုးကျယ်များရှိသောနောက်မျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာမှာပိုမိုအားကောင်းကိုက်ရှိပါတယ် PS5 305 ။
၎င်းသည်အင်္ဂလန်တွင်မွေးမြူသည့်မူလဇာစ်မြစ်နှင့်အတူ Pit Bull နှင့်အလားတူသမိုင်းကြောင်းရှိသည်။ ၎င်းသည်တိရစ္ဆာန်များကိုအမဲလိုက်ရန်နှင့်မွေးမြူရန်အတွက်မွေးမြူထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အင်အားကြီးမားပြီးသွက်လက်မြန်ဆန်သည်။
ဒီမျိုးပွားတွေအကြားကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကသူတို့ရဲ့စွမ်းအားကြီးမားမှုကိုပြသဖို့သူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်။ Pit Bull သည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအမျိုးအနွယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဆိုပါခွေးဘီလူးက၎င်း၏မိသားစုကိုချစ်သော်လည်း, ဖြစ်နိုင်သည် ခန့်မှန်းရခက် လူတွေကို ဦး တည်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။
American Pit Bull Terrier နှင့် Boxer တို့ဖြစ်သည်
The လက်ဝှေ့သမား ခွေးတစ်ကောင်သည်ကိုက်ခဲသောအရှိန်နှင့် Pit Pit နောက်ကွယ်တွင်ရှိသည် 230 PSI ။
ဤခွေးသည်ရှည်လျား။ ပျင်းရိကာမယုံနိုင်လောက်အောင်ခုန်တတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်စွမ်းအင်မြင့်မားပြီးပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
လက်ဝှေ့သမားများလည်းဖြစ်ကြသည် မိသားစုခွေးတွေ အလွန်ချစ်ခင်ခြင်းနှင့်ချိုမြိန်။ သူတို့ဟာတူညီတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ Pitty ရဲ့ခွေးဂုဏ်သတင်းကိုမကာကွယ်ကြဘူး။
ဤအမျိုးနှစ်မျိုးနီးပါးတူညီကိုက်အင်အားရှိသည်သော်လည်း, Pit Bull ရဲ့အမွေအနှစ်, ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်အကာအကွယ်သဘောသဘာဝရန်, က Boxer ကိုကျော်နိုင်တယ်လို့ပြောဘေးကင်းလုံခြုံပါတယ်။
အမေရိကန် Pit Bull Terrier နှင့် Rottweiler
အားကြီးသောသူ၊ ကျောက်တံတား ကိုက်အင်အားစုဖြစ်ပါတယ် 328 PSI ။ ဤခွေးကလေးသည်ခွန်အား၊ သွက်လက်မှုနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရေတွက်ရမည့်စွမ်းအားတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဖြစ်ကြီးပြင်း အလုပ်လုပ်ခွေး , Rottweiler လေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းအသိဉာဏ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်၎င်းသည်စက်ဖြစ်သည်။
Pit Bull နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Rottweiler သည်အလုံးစုံနှင့်သက်ဆိုင်သည် ခွန်အား နှင့် ခံနိုင်ရည်။
American Pit Bull Terrier နှင့် German Shepherd တို့ဖြစ်သည်
The ဂျာမန်သိုးထိန်း (GSD) တွင်ရှိသည် 238 PSI , Pit Bull မှဝေးမဟုတ်ပါသော။
ဒီမျိုးကွဲနှစ်ခုဟာအသွင်အပြင်နဲ့တော်တော်ကွာခြားပေမယ့်နှစ်ဖက်စလုံးကအန္တရာယ်ရှိတဲ့မမျှတတဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုခွဲထားပါတယ်။ ဂျာမန်သိုးထိန်းများကိုလည်းတားမြစ်စာရင်းများတွင်တွေ့ရလေ့ရှိပြီးအလွန်အမင်းပါ ၀ င်သည် အကာအကွယ် အပြောအဆို။
GSD သည်တစ်ခုဖြစ်သည် အများဆုံးအသိဉာဏ်ခွေးဝတ်ရည် ကမ္ဘာပေါ်မှာ။ ၎င်းသည်ရဲ၊ စစ်တပ်နှင့်ကုထုံးအတွက်ပိုမိုနှစ်သက်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်မှုသည်ဤမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောခွေးရူးကိုအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပြီး GSD သည်ခွေးပြပွဲများတွင်ထိပ်တန်းပြိုင်ဘက်တစ် ဦး ဖြစ်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
အစွမ်းသတ္တိကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါ, ဒီနှစ်ခုနှစ်ခုညီမျှမဲနှိုက်သို့ရောက်ကြ၏။ ကိုက်စွမ်းအားသည်တူညီသော်လည်း GSD မှာလည်းအလားတူဖြစ်သည် မြန်ပြီးသွက်လက် ။ ဒါကမြင့်မားသောထောက်လှမ်းရေးဖြစ်စေထိခိုက်စေပါဘူး။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, Pit Bull ကြွက်သားများနှင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်သည်, ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဖို့ drive ကိုအတူ။
American Pit Bull Terrier သည်ခွေးတိုက်ပွဲတွင်“ badass” အဖြစ်နာမည်ကြီးခဲ့သည်။ အို၊ ဒီကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဖျော်ဖြေမှုသည်ဒီနေ့နှင့်ယခုခေတ်၌ပင်မျိုးပွားမှုကိုကပ်ဘေးဖြစ်စေသည်။
အမှန်တရားကတော့ Pittie ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇကိုဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ပြီးတိုက်လေယာဉ်ကြီးတစ်ခုဖန်တီးဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ နူးညံ့သိမ်မွေ့ ။
အမေရိကန် Pit Bull Terriers ဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသောအသိဉာဏ် နှင့်နှစ်သက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်။ သူတို့ရတယ် အားကစားအခွက်, ပြဌာန်းခွင့်နှင့်ရဲစွမ်းသတ္တိ နွားငါးမျှား၏နေ့ကနေ။
ဒီခွေးတွေကိုထိန်းခွေးလို့ခေါ်တဲ့အချိန်ကိုမေ့မထားပါနဲ့ ကလေးများအတွက်သဘာဝအချစ် ။ Pit Bulls သည်အလွန်သစ္စာရှိပြီးမိသားစုကိုကာကွယ်သည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာအထီးကျန်နေခဲ့လျှင်၊ စိုးရိမ်စိတ်ခွဲခြာ သတ်မှတ်လိမ့်မယ်
ခွေးမျိုးစိတ်များလိုပဲ၊ Bull Bull ခွေးကလေးသည်အကောင်းဆုံးစရိုက်များနှင့်အပြုအမူများကိုဖော်ပြရန်ကြီးပြင်းလာသည်။ အစောပိုင်းလူမှုရေးနှင့်နာခံမှုလေ့ကျင့်ရေး မဖြစ်မနေဖြစ်ကြသည်။
သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုလိုလားလားရှိရန်လိုအပ်သည် အချိန်, ပိုက်ဆံနှင့်စွမ်းအင် Pit Bull အတွက်ဂရုစိုက်ရန်။ ဤသည်မှာသင်လွယ်ကူသောကံကောင်းသည့်ပေါင်ပေါင်ခွေးမဟုတ်ဘဲသင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အခါတိုင်းသင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ၌ထည့်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
Pit Bull သည်သူမမိသားစုကို 100% မြှုပ်နှံထားပြီးကာကွယ်ပေးရန်အလွန်ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းချက်နှင့်အတူ။ သို့သော်သူမသည်ထိုတာ ၀ န်ကိုလက်ခံလိမ့်မည် အထုပ်၏ခေါင်းဆောင်။
မာစတာအနေနှင့်သင်လိုအပ်သည် မင်းဟာမင်းကိုတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြပါ ။ ဆိုလိုသည်မှာအပြုသဘောအားဖြည့်ခြင်းဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်း၊
လေ့ကျင့်ရေးကိုတသမတ်တည်းဖြစ်ရန်လိုအပ်သည် , ကာလ။ ဤသည်ကိုသင်မွေးမြူရေး၏ဝိသေသဖြစ်သောခေါင်းမာမှုကိုအောင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Pitty ရဲ့နှင့်အတူ coupled အဆိုပါခေါင်းမာ အသိဉာဏ်နှင့်ပြဌာန်းခွင့် စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားမဟုတ်လျှင်လက်တဆုပ်စာဖြစ်စေ။ ဒီအပြုအမူဟာအထူးသဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကလာတဲ့အခါမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဤရွေ့ကားဤခွေးမျိုးဆက်အများအပြားပြသရန်ကျရောက်နေတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ကြောင်းသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်။ အသွင်အပြင်၊ သမိုင်းနှင့်အတည်မပြုနိုင်သောဒဏ္sာရီများသည်ဤမျိုးနွယ်အပေါ်သင်၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ကိုအနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေပါနှင့်။
APBT များအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်း ၃ ခု
Pit Bull သည်လေ့ကျင့်မှုသည်အလေးအနက်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိရပါ။ သင်တစ် ဦး ငှားရမ်းလိုပေမည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ခွေးသင်တန်းဆရာ အလုပ်ကိုင်တွယ်ရန်။ သငျသညျကျောက်ကပ်ယူပြီးအပေါ်စီစဉ်ထားလျှင်, ဤတိကျတဲ့ လေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းများ သင့်ရဲ့ Pitty အတွက်အကောင်းဆုံးထုတ်ဆောင်ခဲ့လိမ့်မယ်။
ဤသည်မှာမည်သည့်ခွေးပင်ဖြစ်ပါစေခွေးလေ့ကျင့်ရေးစနစ်၏အခြေခံဖြစ်သင့်သည်။ သင့်ရဲ့ခွေးကလေးကိုထုတ်ယူပြီးအဲဒါကိုပေါင်းသင်းခြင်း အခြားကလေးများ၊ လူကြီးများနှင့်ခွေးများ သူမသည်သူမရင့်ကျက်အဖြစ်သူမ၏လျော့နည်း skittish နှင့်ရှက်စေမည်။
ဒါက Pit Bull ဖောက်တစ် ဦး အတွက်အကောင်းဆုံးတတ်၏ ခြံစည်းရိုးခြံနဲ့အိမ် ။ သေးငယ်တဲ့တိုက်ခန်းရုံ romp နှင့်စူးစမ်းဖို့လုံလောက်တဲ့နေရာမပေးပါဘူး။
သင့်ရဲ့ဒေသခံထွက်ရှာတွေ့ ခွေးပန်းခြံ ပြီးတော့သူမမျက်နှာသစ်တွေကိုကြည့်ပြီးအနံ့ခံဖို့လေ့ကျင့်နိုင်အောင်တနင်္ဂနွေမှာ Pitty ကိုယူပါ။ သူ့ကို leash ဆက်ထားရန်နှင့်သူမနှင့်ရင်းနှီးဖော်ရွေသောခွေးများကိုချဉ်းကပ်ရန်နှင့်အနံ့ခံရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။
သင့်ရဲ့ Pit Bull ခွေးပန်းခြံအတွင်းရှိ leash မှမသွားပါစေနဲ့။ ခွေးရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့လျှင်သူမ၏အဆုံးအဖြတ်သည်သူမအဆုံးအထိတိုက်ခိုက်ရန်ရှိလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောအခါဤဖောက်ပြန်ကျလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ညာဘက်ရှိအမေရိကန် Pit Bull Terrier ( အရင်းအမြစ် )
ခွေးတိုက်ပွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏သမိုင်းကြောင်းအရ Pit Bulls သည်သဘာဝအလေ့အကျင့်ရှိသည် အခြားခွေးများကို ဦး တည်ကျူးကျော်မှုကိုပြပါ ။
ဟုတ်ကဲ့၊ လူမှုရေးကူခြင်းကသူမကိုနှုတ်ဆက်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နာခံခြင်းလေ့ကျင့်ခြင်းကသူမအပေါ်ယုံကြည်မှုနှင့်ကျင့်ဝတ်ကိုသင့်အပေါ် မူတည်၍ လိုက်နာရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Pit Bulls သည် command များကိုလိုက်နာရန်နှစ်သက်ပြီး၎င်းတို့တွင်aစွမ်းအင်တန်ချိန် ။
နှင့်အတူနာခံမှုလေ့ကျင့်ရေးတွဲဖက်မှု သွက်လက်လေ့ကျင့်ရေး သင်နှစ် ဦး ကိုနှောင်ကြိုးအတွက်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနည်းလမ်းတစ်ခုသာမကသူမ၏လှုံ့ဆော်မှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိစေပြီးစွမ်းအင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးနောက်တစ်လှည့်လှည့်လည်ကြည့်ရှုသောအခါသင့်အားကြည့်ရှုရန်သင်ကြားပေးလိမ့်မည်။
American Pit Bull Terrier ၏ခွန်အားကြောင့် leash ပြင်ဆင်ချက်နှင့်အပြစ်ပေးမှုများသည်နာခံမှုလေ့ကျင့်မှုနှင့်မကြာခဏဆက်စပ်နေသည်။ အမြဲတမ်းအလုပ်မလုပ်ပါဘူး ဒီဖောက်ဘို့။
အသုံးပြုကြည့်ပါ ကလစ်လေ့ကျင့်ရေး ဒါမှမဟုတ် ဆု အပြုသဘောဆောင်သောတွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်သင်၏ Pit Bull ကိုလှုံ့ဆော်ရန်။
3. Canine ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံသားလက်မှတ်
ဤအစီအစဉ်နှင့်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကို AKC မှတီထွင်ခဲ့သည်။ ခွေးများကိုတိုင်းတာရန်ကျွမ်းကျင်မှုအတော်များများကိုစစ်ဆေးသည် နာခံမှုနှင့်သဘောထား။ အကယ်၍ ခွေးသည်ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်လျှင်သူသည်ကောင်းမွန်သောနိုင်ငံသားလက်မှတ်ရရှိလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ မည်သည့်ခွေးမဆိုဒီပရိုဂရမ်ကိုသွားနိုင်ပေမဲ့အထူးသဖြင့် Pit Bulls အတွက်အကျိုးရှိလို့ပါ။
သင်နေထိုင်သည့်နေရာပေါ် မူတည်၍ ဥပဒေပြa္ဌာန်းခြင်းကြောင့်အိမ်တစ်လုံးငှားရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အိမ်ပိုင်ရှင်သည်ဖောက်ခွဲမှု၏ဂုဏ်သိက္ခာကြောင့်တွန့်ဆုတ်နိုင်သည်။ ဒီလက်မှတ်ကိုတင်ပြခြင်းဖြင့်သင်၏ခွေးသည်တည်ထောင်ရန်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့သည်ကိုပြသည် ကောင်းသောအပြုအမူ ။
ထိုကဲ့သို့သောဒီတစ်ခုအဖြစ်အစီအစဉ်များကိုပြီးစီးခြင်းကိုလည်း Pittie ရဲ့မကောင်းတဲ့ခွေးကိုယ်စားလှယ်ဖျက်သိမ်းဆီသို့ ဦး တည်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
AKC ပရိုဂရမ်အကဲဖြတ်သူများကိုသင်ရှာနိုင်သည် ဒီမှာ ။
ဒီဖောက်ထွင်းမှု၏စွမ်းအင်အဆင့်သည်တက်နေသည်။ သူသည်သူမ၏လေ့ကျင့်ခန်းကိုမရရှိပါကသင့်ကိုပျက်စီးစေသောသူငယ်နှင့်သင့်ကိုချန်ထားမည်။ ပြီးတော့ သူမဝါးတာကိုနှစ်သက်တယ် သူမဒီစွမ်းအင်အားလုံးကိုအသုံးချပြီးသင်ရဲ့ဖိနပ်နဲ့ပရိဘောဂတွေကိုသူမလှည့်ပေးရမယ်။
အနည်းဆုံးရည်စူးဖို့မျှော်လင့်ထား နေ့တိုင်းတစ်နာရီ အချိန်ကစားရန်။ သင်၏ Pit Bull နှင့်သင်ဖန်တီးနိုင်သည့်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။
လူမှုရေးအပေါ်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ခွေးပန်းခြံမှာ romp နှင့်အတူပျော်စရာရှိသည်။
မိုးရာသီတွင်အရည်အသွေးပြည့်ဝါသနာပါသည့်ကစားစရာများကိုရွေးချယ်ထားပါ။ Pit Bull သည်ဝါးခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။
တစ်ခုသတ်မှတ်မည် အတားအဆီး သွက်လက်လေ့ကျင့်ရန်အိမ်နောက်ဖေး၌တည်၏။
ဤသည်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ကျန်းမာရေးနှင့်အတူ All- န်းကျင် Hardy ဖောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Pit Bull သည်ပျမ်းမျှသက်တမ်းရှည်သည် 12 မှ 16 နှစ် ။
ခွေးမျိုးစိတ်တစ်ခုမှသာမန်မျိုးရိုးဗီဇရောဂါများမှခုခံနိုင်စွမ်းမရှိသော်လည်း Pit Bull နှင့်လည်းမတူပါ။
ဒီမှာသတိပြုရမည့်ထိပ်တန်းအမေရိကန် Pit Bull Terrier ကျန်းမာရေးပြissuesနာများ။
အရိုးပါးရောဂါ အချို့သောဟော်မုန်းများလုံလောက်စွာမထုတ်လုပ်နိုင်ပါကဤရောဂါသည်သိုင်းရွိုက်ကိုတိုက်ခိုက်သည်။ သင်၏ Pittie ရှိစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှေးမှိန်မှု၊ စိတ်ပင်ပန်းမှု၊ လေ့ကျင့်မှုကိုသည်းမခံခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းကိုသင်သတိပြုမိပါက Vet ကိုစစ်ဆေးပါ။
ဓာတ်မတည်: သင်္ချိုင်းတွင်းများသည်ကျည်ဆန်များဖြစ်သည် အရေပြားဓာတ်မတည် ခြောက်သွေ့သောယားယံသောအသားအရေနှင့်သူတို့ကိုစွန့်ပစ်စေသည်။ ကံကောင်းတာက၊ သင်ကြိုးစားနိုင်သည့်သဘာဝနှင့်သတ်မှတ်ထားသောကုသမှုများစွာရှိသည်။ သင်၏ခွေးအတွက်အကောင်းဆုံးအဖြေကိုရှာဖွေရန်သင်၏ветеринарияနှင့်စကားပြောပါ။
နှလုံးရောဂါ: American Pit Bull Terrier သည်အဆို့ရှင်ပုံမမှန်ခြင်း၊ မမှန်ခြင်းနှင့်မွေးရာပါနှလုံးချို့ယွင်းခြင်းများဖြစ်နိုင်သည်။
Hip Dysplasia: ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြီးထွားမှုနှင့်တင်ပါးဆုံရိုး၏ပုံပျက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောမျိုးရိုးဗီဇရောဂါဖြစ်သည်။ dysplasia တင်ပါးဆုံရိုး စိတ်ရှုပ်ထွေးဖွယ်နာကျင်မှုဖြစ်သဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ရွေ့လျားမှုဆုံးရှုံးမှုနှင့်ခြေဆွံ့ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အဝလွန်ခြင်း American Pit Bull Terrier အစားအစာကိုရွေးချယ်သည့်အခါသင်စောင့်ကြည့်ချင်သောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
အရည်အသွေးမြင့်သောခြောက်သွေ့မှုကိုရွေးချယ်ပါ ခွေးစာ အဲဒါကိုခွဲထားတယ် နေ့တိုင်းနှစ် ဦး အစားအစာများ ။ Pit နွားများအတွက်မူထိုထက်မကသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံယူသင့်ပါသည် 2.5 ခွက်မှ 2.5 ခွက် နေ့စဉ်စားသုံးမှုသည်။
အရေပြားဓာတ်မတည့်မှုသည်ဤမျိုးပွားမှုအတွက်အသုံးများသောပြproblemနာဖြစ်သောကြောင့်ရှောင်ကြဉ်ရမည့်အစားအစာများနှင့်အခြားအခြေအနေများအတွက်အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်အခြားအစားအစာများကိုသင်၏ vet နှင့်ပြောဆိုပါ။
သင်ဤဖောက်ခွဲခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီး Pit Bull ခွေးကလေးတွင်ဝင်လိုပါကလေးနက်သောမုန့်စိမ်းကိုသုတ်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။
ထိပ်သွေးဖြူပါသည့်စင်ကြယ်သော Pit Bull ခွေးကလေးသည်မည်သည့်နေရာမှမဆိုကုန်ကျမည် $ 2000 မှ $ 20,000 ။ တစ် ဦး ကဲ့သို့သော Pittie မျိုးကွဲ အပြာရောင်နှာခေါင်း Pitbull နှင့်က နှာခေါင်းနီ ထို့အပြင်ပိုမိုကုန်ကျလိမ့်မည်။
အသင့်အတင့်ရှိသောသွေးကြောများရှိသည့် Pittie ခွေးငယ်များသည်စျေးကြီးလွန်းပြီးမျိုးဆက်များသည်အားသွင်းရသည် $ 800 မှ $ 1000 တစ်ခုချင်းစီကိုခွေးကလေးသည်။
ဒါကအစပဲ။ သင်သည်သင်၏ခွေးကလေးကို ၀ ယ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ ၀ ယ်ယူရန်၊
မှတ်ပုံတင်ပြီးနှင့် tags: သင်၏ Pit Bull သည်အထူးတံဆိပ်များလိုအပ်သလားသို့မဟုတ်မှတ်ပုံတင်ရန်လိုမလိုသိရန်သင့်ပြည်နယ်နှင့်စစ်ဆေးပါ။ ဒီဟာဒေါ်လာ ၅၀ လောက်ကုန်ကျနိုင်တယ်။
နှစ်ပတ်လည်ဆေးစစ်ချက် $ 250
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကျန်းမာရေးအာမခံ: $ 225
spaying သို့မဟုတ် neutering: $ 200
ဂီယာနှင့်ကစားစရာများ: $ 300
အစားအစာ $ 120
ဤမျှသာခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းသတိရပါ နှစ်စဉ်ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏ခွေး၏ထူးခြားသောလိုအပ်ချက်၊ သင်ဝယ်ယူသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ ရွေးချယ်ထားသည့်အာမခံအစီအစဉ်နှင့်သင်အားလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်း၊
ဒီမှာအဓိကအချက်ကဒါပဲ သင်ခွေးစျေးပေါမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရန်လိုအပ်သည် ။ ဒါဟာသင်ကန ဦး စျေးနှုန်းကိုပေးပြီးပြီးတော့သူကရိုင်း run ကြကုန်အံ့နိုင်သည့်ကစားစရာမဟုတ်ပါဘူး။
Pit Bull ကိုသင့်လျော်သောဂရုစိုက်မှုနှင့်နှစ်သိမ့်မှုပေးနိုင်ရန်သင်မည်မျှထပ်ဆောင်းငွေမည်မျှလိုအပ်သည်ကိုခန့်မှန်းရန်အတွက်ထိုင်။ လစဉ်ဘတ်ဂျက်ဆွဲပါ။
သငျသညျအွန်လိုင်းအမေရိကန် Pit Bull Terrier မျိုးဆက်များကိုရှာဖွေလျှင်, သင်၌သူတို့၏အစီးရှိပါတယ်အလျင်အမြန်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဤနေရာတွင်သင်စစ်ဆေးနိုင်သော APBT မျိုးဆက်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးသော Pitbulls Made (Tennessee)
Mugleston ရဲ့ Pitbull လယ်ယာ (ဥက္ကလာဟိုးမား)
Tatonka ခွေးဂေဟာ (ဖလော်ရီဒါ)
သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးခွေးကလေးကိုရှာဖွေရန်စေ့စပ်သေချာစွာသုတေသနပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ Pit Bull နှင့်အတူသင်ဤမျိုးပွားကိုစိတ်အားထက်သန်နေသောမျိုးဆက်တစ်ခုကို ဦး စားပေးရှာဖွေလိုသည် အရေအတွက်ကျော်အရည်အသွေး။
ခွေးပေါက်လေးများ ဤလူမဆန်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်နေသောလူစုလူဝေးများသည်အလျင်အမြန်လုပ်ရန်လိုအပ်သမျှကိုပြောပါသို့မဟုတ်လုပ်လိမ့်မည်။ ခွေးတစ်ကောင်နှင့်သွေးမကောင်းသောကြောင့်သင်သည်ရောဂါနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဆိုလိုသည်။
သူတို့က Pitty အသိုင်းအဝိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းအတွက်ဂုဏ်ယူကြသည်။ လေးစားသော breed club များပိုင်သောမျိုးဆက်များကိုရှာဖွေပါ။ သူတို့ကအစခွေးများကိုမှတ်ပုံတင်လိမ့်မည်။
သင့်ကိုမိဘတွေနဲ့တွေ့စေချင်တယ်။ ကောင်းမွန်သောကျန်းမာရေးနှင့်ခိုင်မာသောသွေးကြောများသေချာစေရန်ခွေးပေါက်စတစ် ဦး ၏မိဘများကိုစစ်ဆေးပါ။ ၎င်း၏မိဘများ၏အပြုအမူသည်သူငယ်၏စိတ်ထားနှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောဆိုသည်။
သူတို့သည်သင့်အိမ်သို့လည်ပတ်ရန်သင့်ကိုဖိတ်ခေါ်သည်။ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမျိုးပွားသူသည်ခွေးကလေးအားမွေးဖွားကြီးပြင်းသည့်နေရာကိုသွားရန်စိတ်အားထက်သန်သည်။ အဲဒီလမ်း, သင်ခွေးပေါက်စရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးအိမ်၏အခြေအနေများတစေ့တစောင်းရ။
သူတို့ကသူတို့ရဲ့ခွေးပေါက်စတွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုစိုးရိမ်တယ် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်သည်အတိတ်ဖောက်သည်များ၏ကျန်းမာရေးရှင်းလင်းချက်၊ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလချောချောမွေ့မွေ့သေချာစေရန်ကန ဦး ၀ ယ်ယူပြီးသည့်နောက်သူတို့အနေဖြင့်လည်းအဆက်အသွယ်ရှိမည်။
American Pit Bull Terrier ကလေးမွေးစားခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ခြင်း
ခွေးပေါက်များ၊ ခွေးများတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်ဤဖောက်သည်များ၏တာဝန်ကိုမကိုင်တွယ်နိုင်သောပိုင်ရှင်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ အမိုးအကာများ၌အဆုံးသတ်သွားသည့် Pit Bull များမြောက်မြားစွာရှိနေသည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
မွေးစားခြင်းသည်သင်၏လမ်းကြားသာဖြစ်သည်ဆိုပါကဤအချက်များကိုကြည့်ပါ အမေရိကန် Pit Bull Terrier ကယ်ဆယ်ခဲ့သည်။
တစ် ဦး က Rotta မတ်ေတာ Plus အား (မင်နီဆိုတာ)
Pit Bull ကယ်ဆယ်ရေးဗဟို (မစ်ဆူရီ)
Biggies အနိုင်ကျင့်ကယ်ဆယ်ရေး (Pennsylvania)
American Pit Bull Terrier လိုခွေးတွေ
ဤအရာကိုဖတ်ပြီးနောက် Pit Bull သည်သင်အတွက်မဟုတ်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ အဆင်ပြေပါတယ်! ဒီဖောက်တောင်းဆိုတစ်ခုဖြစ်ပါသည် အချိန်ပိုနှင့်တာဝန်။
စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့! သူတို့ကို Pitty နည်းနည်းရှိသည်သောအခြားဝတ်ရည်အများအပြားရှိပါတယ်။ ဤလူကြိုက်များ Pit Bull ရောနှောစစ်ဆေးမှုများ:
အိတ်ဆောင် Pit Bull
Pit Bull Boxer ရောနှော
Pit Bull Chihuahua ရောစပ်ပါ
Pit Bull Husky ရောနှော
ဂျာမန်သိုးထိန်း Pit Bull Mix
Pit Bull ဓာတ်ခွဲခန်းရောနှော
Pitbull Mastiff ရောနှော
ရွှေပြန်လည်ရယူသည့် Pitbull ရောနှောမှု
Malamute Pitbull ရောနှောခြင်း
ဒါကထုပ်ပိုးပြီးပါပြီ။ ယခုသင်အမေရိကန် Pit Bull Terrier ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်ကြည့်ပြီးပြီဆိုလျှင်ဒီအငြင်းပွားဖွယ်ဖောက်ခွဲမှုသည်အငြင်းပွားစရာမဟုတ်ပါ။
ဒါဟာကြာပါတယ် ခွေးပိုင်ရှင်အထူးအမျိုးအစား သူက Pittie ကလိုအပ်တဲ့လေ့ကျင့်ရေးပေးရန်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အချိန်ရှိသည်။
ဒီဖောက်သူတစ်စုံတစ် ဦး အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ပါတယ် အလုပ်မလုပ်ပါဘူး အများကြီး။
ဒီခွေးပိုင်ရှင်ပိုင်ရှင်ကသူတို့ရဲ့ Pitty ကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့နေ့တိုင်းအချိန်ယူနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်ခွေးအဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်း၏ပိုင်ရှင်မှပူးတွဲရရှိဒါကြောင့်မိသားစုများအတွက်ဝေးဖြစ်မခံမရပ်နိုင် ရှည်လျားသောကာလ အချိန်။
အကယ်၍ သင်သည်မြို့ထဲရှိသေးငယ်သောတိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်ပါက Pittie သည်သင့်အတွက်မသင့်တော်ပါ။ Pit Bull သည်စွမ်းအင်မြင့်မားစွာဖြင့်အလတ်စားဖြစ်သည့်အတွက်၊ ခြံနှင့်အတူအိမ် သူမ၏တက်ကြွသောလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ။
နောက်ဆုံးသင်သည်စိတ်ရှည်မှု၊ တသမတ်တည်းရှိမှု၊ Pit Bull သည်ပိုင်ရှင်တစ် ဦး လိုအပ်သည် အထုပ်၏ alpha ခေါင်းမာခြင်းနှင့်ကျူးကျော်မှုကိုနှိမ်နင်းရန်။
American Pit Bull Terrier နှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဘယ်လိုထင်သလဲ မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ!
500+ Husky Names: သင်ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အပြည့်စုံဆုံးစာရင်း
golden retriever cross cocker spaniel ဖြစ်သည်